कोलगेट मञ्जनमा ‘त्रिक्लोसा’ नामक स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिने रसायन भेटिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।कोलगेटमा क्यान्सर विकासमा सहयोग गर्ने ‘त्रिक्लोसा’ भेटिएको टक्सीकोलोजी जर्नलले जनाएको हो । त्रिक्लोसाको उच्च प्रयोगले क्यान्सरको कोष विकास गर्ने अध्ययनले दाबी गरेको छ ।
यस्तै यो रसायनले शरीरको महत्वपूर्ण अंगमा नोक्सानी गर्छ ।स्वास्थ्यको लागि त्रिक्लोसा हानिकारक भएको सन् २००८ मै पुष्टि भए पनि कोलगेटले मानिसको स्वास्थ्यमा कुनै असर नगर्ने भन्दै प्रयोग गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्रिक्लोसा प्रयोग क्यानाडामा प्रतिबन्ध लगाइए पनि अरु देशमा वास्ता गरिएको छैन ।
दाँत कसरी माझ्ने? धेरैपटक ब्रस गरे के हुन्छ?
फेरिँदो जीवनशैलीले मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रभाव पारिरहेको छ। यसमा मुख स्वास्थ्य पनि पर्छ। चिकित्सकहरुले दिनमा दुईपल्ट दाँत माझ्न सुझाव दिन्छन्।
तर सधैँ यो संभव हुँदैन। पढाईका लागि बिहान कलेज निस्कने र दिउँसो काममा जाने मानिसहरुको सन्दर्भमा खाना पछि ब्रस गर्न संभव हुँदैन। यस्तो दाँतलाई के के असर पर्छ भन्ने बोरमा २५ वर्षदेखि दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत डा. सुशील कोइरालाले देशसञ्चारलाई बताएका छन्।
खाना खाएपछि दाँत माझ्न बिर्सियो भने के हुन्छ ?
बिहान बाहिर खाना खाने र ब्रस गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा के गर्ने ?
यो आचारणमा भर पर्ने कुरा हो। राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेनौ भने, स्याहार सम्भार गरेनौ भने पाँचन प्रणालीको पहिलो समस्या मुखबाट सुरु हुन्छ। दाँतमा किराले आक्रमण गर्छ। दाँतमा दुख्ने समस्या भएपछि मात्र डेन्टिसको सम्पर्कमा बिरामी आउने गर्छन् तर धेरैजसोलाई दाँत किराले प्वाल पारेको पनि थाहा हुँदैन। गाउँमा लाटो किरा लागेको भन्छन्, किराले दाँत मकिदै गयो तर उसलाई थाहा नै हुँदैन। नसुन्निदासम्म पनि बिरामी चिकित्सकको सम्पर्कमा आउँदैनन्।
२५ वर्षदेखि दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत डा. सुशील कोइराला
मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्दा ब्रग गर्ने बानीको बारेमा मात्र कुरा हुन्छ नि ?
धेरै ब्रस गर्‍यो भने दाँतको इनामेल जान्छ भन्छन् नि ?
फ्लोराइड भएको मञ्जन चाहिन्छ भन्छन् किन ?
नेपालको पानीमा फ्लोराइड कम छ, त्यसैले फ्लोराइड भएको पानी भनिएको हो। फ्लोराइडले दाँतको इनामेलको संरचनालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । साथै किरा लाग्ने समस्या कम हुन्छ। अहिले नेपालमा पाइने पेस्टमा फ्लोराइड हुन्छन्। यो बाहेक मञ्जनमा डिटरजेन्ट, ग्लिसरिन लगायतका तत्व हुन्छन्। बास्नाको लागि मेन्थोल, अनि क्याल्सियम पनि हुन्छ।
ब्रस कस्तो चाहिन्छ ?
कसरी माझ्ने ?
ट्वाइलेट बस्दा दाँत माझ्ने बानी हुन्छ नि ?